_Imidlalo yeethrone_. Ufunda ntoni uJon Snow? Kunye neKit Harington | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, I fantasy, Iincwadi
Ifoto ephambili ngoncedo lwe-HBO Spain. Iifoto zomhlobo wam u-Bego MC osebenza naye odibene noKit Harington ngaphezulu kwesihlandlo esinye eLondon Underground.
Okokuqala kunzulu kwam konke mbulelo kumhlobo wam omkhulu uBego MC. Uthando lwakhe, umdla, ukuzinikela (kunye nenhlanhla encinci) ngo Umdlalo wetrone benze oku kwenzeke into ekhethekileyo ye-AL. Kwaye ke umdlali Kit Harington (eyaziwayo UJon Snow) ngobubele babo ekubolekeni ukuba bathethe malunga ukufundwa kwakho, iinkxalabo ezingakumbi zoncwadi kunye nomsebenzi wakhe. Namhlanje Ndiyabelana nabo Nabo bonke abalandeli kunye nabafundi yenye yezona zininzi odumileyo, odumileyo kunye nempumelelo fantasy sagas eziye zahlengahlengiswa kumabonakude.
Qhubeka, ndingomnye wabantu abambalwa kwihlabathi elaziwayo ngubani ayixhumananga a Umdlalo wetrone. Ndisandula ukuvela ku I fantasy de Ibali elingenasiphelo ngu-Michael Ende, kodwa hayi isini sam.
Ndingakwazi kuphela nge Ixesha lokuqala kunye nencasa yam yamagama amiselweyo (UMark Addy, u-Ian Glenn, uSean Bean) waloo mbumba. Kodwa emva kwe ukudubula kakubi ukubona intloko ye UNed Stark kwaye ujonge ukuba hayi Umnxibelelanisi nokuba yeyiphi na iTargaryens, andizange ndiphinde ndiyithathe. Nangona kunjalo, Ndiyazi kakuhle malunga nobudenge, ukuncoma kunye nomdlandla yezigidi zabalandeli bakhe.
2 Iincwadi ozithandayo
5 Umboniso bhanyabhanya
Uzalelwe eWorcester nge-26 kaDisemba ngo-1986, uHarington ungene kwi Amashumi amathathu ukuba yenye ye Abadlali abadumileyo kwiminyaka yakutshanje. Konke kokwakhe charismatic umlinganiswa kaJon Snow. I inyani kwihlabathi liphela lokuziqhelanisa nomdlalo bhanyabhanya wenoveli yesaga ngu George RR Martin isenokunganqandeki. Ke ngoku amaxesha asixhenxe Sele inile kakhulu le nto kulutsha nolutsha olusandula ukwenzeka.
Ndiyakuthanda ukufunda, akukho nto ingcono kunokuziphumza kwaye ndifunde incwadi elungileyo.
Ndiyakuthanda ukufunda, akukho nto ingcono kunokuziphumza kunye nokufunda incwadi elungileyo.
I-anecdote yokuqala ityhila ukuba yintoni enye yezimbalwa abadlali bemidlalo ukuba uzifundile zonke iincwadi NguMartin. Kodwa kwakudala, uHarington wayesebenza kwivenkile ethengisa iincwadi kwikhonkco Amatye Amanzi eLondon, ndandingazi ukuba ngubani uMartin owonwabileyo kwaye wabuphika ubunzima beencwadi zakhe yayilixesha lakhe lokuba anyuke esuka kwindawo yokugcina izinto ukuze abeke kuzo. Kwaye yintoni isiphelo ... Ngoku bayanqula omnye komnye.
Ezo zobuntwana bakhe yayi zezo Harry Potter kwaye naye wayethanda intsomi yesayensi. Ngoku uyavuma ukuba ungumthandi weencwadi ngaphezulu kwesithuba nothando lwakhe lweentsomi luhlala luhleli.
Su incwadi ayithandayo lonke ixesha li 1984 NguGeorge Orwell. Kwakhona Nayiphi na Intliziyo Yomntu ngu-William Boyd o Igosa eliyimfihlo (Igosa eliyimfihlo) nguJoseph Conrad. Ewe ibonisa konke UDickens y Iimbandezelo NguVictor Hugo. Unomdla Ursula K. iGuin, Umbhali waseMelika weenoveli ezingamabali kunye nezesayensi ngaphezu kwako konke, ngemisebenzi yakhe Abahluthiweyo o Amabali e Itram. Kwaye uyathanda Ibali lesicakakazi de UMargaret Atwood.
Ngaba i ukukhankanywa ngokukhethekileyo kwi ITestamente yobutsha (Ngaba ukuthanda ulutsha) nguVera Brittain. Wayeyifunde esikolweni kwaye akufumanisa ukuba kuya kwenziwa ifilimu, wenza konke okusemandleni ukufumana le ndima Yembongi / ijoni uRoland Leighton.
UHarington naye uyayithanda imibongo kwaye ubhale, nangona kunjalo cinga ukuba ayilunganga kwaye akazimiselanga kupapasha, kodwa abahlobo bakhe bayaphawula akukubi konke konke. Eyona nto ayithanda kakhulu yile Bhengeza kwaye ufunde. Phakathi kweembongi zakhe azithandayo kukho UWilliam Blake, uJohn Keats, uRobert Frost, uWilliam Wordsworth, kunye noSiegfried Sassoon.
UHarington ukwangumdlali weqonga. Kuye kufana nokuphefumla kwaye uthi Umama wakhe wamthiya igama lokuba nguChristopher emva koChristopher Marlowe, owayekwabizwa ngokuba ngu "Kit". Ukuvuka kwakhe kweqonga kwaba Ukulinda uGodot kaSamuel Beckett kwaye into yokugqibela ayenzileyo eqongeni ibichanekile ngokuchanekileyo Inguqulelo esemhlabeni Ugqirha Faust Yombhali odumileyo ongumNgesi. Kwakunjalo UTito Andronicus kwaye uShakespeare uthanda yonke into kodwa Ukuthanjiswa kweShrew. Uyayithanda kakhulu iNorway Henrik Ibsen (ICasa de muñecas)
Isazisi esiphindwe kabini.
Ukusweleka nobomi bukaJohn F. Donovan.
I-Gunpowder (emva kwemveliso) - Imisebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » _Imidlalo yeethrone_. Ufunda ntoni uJon Snow? Ikhethekileyo kunye neKit Harington